बधाई ! कुलमान घिसिङले लिए ४ वर्षे नियुक्तिपत्र ।
काठमाडौ : सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिक’रणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ । उनले आजै उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर नियुक्ति लिएका छन् ।
उनलाई उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ४ वर्षे नियुक्तिपत्र प्रदान गरिन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरि’षद्को बैठकले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव
शाक्यलाई भने विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह र अहिले खाईपाई आएको सेवा सुविधालाई यथावत राखी जल तथा उर्जा आयोगको पूर्णकालीन सदस्यमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ ।
भरतपुर महानगर सुरक्षा योजना तयार !
भरतपुर : विकसित मुलुकको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा जानकारी राख्नुभएका प्रहरी उपरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारी भरतपुर महानगरभित्रको सुरक्षा अवस्था नमूना बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ ।
प्रहरीको दर’बन्दी थपलाई भन्दा प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने उहाँको तयारी छ । ठाउँठाउँमा प्रहरी राख्नुभन्दा सिसी क्यामेरा जडानमा उहाँको जोड छ । विदेशमा जस्तै चोकचोकमा प्रहरी उभ्याएर होइन सिसी क्या’मेराबाट अनुगमन गर्ने गरी भरतपुर महानगरको सुरक्षा योजना तयार गरिएको छ ।
घटना भएको दुई–चार मिनेटमा नै प्रहरी पुग्ने गरी अधिकारीले अवधारणा तयार गर्नुभएको छ । महानगर क्षेत्रमा हुने अपराध रोक’थाम, निय’न्त्रण तथा अनुस’न्धानका साथै जिउ, धन र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि अवधा’रण तयार गरिएको अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
चुस्तदु’रुस्त सुरक्षा योजनामा सिसीटिभी जडान, सिआरभी र क्यूआरटी टोली परिचालन रहेका छन् । अधि’कारीका अनुसार महानगरका विभिन्न ९१ स्थानमा १६० वटा सिसीटिभी जडान गर्ने योजना अवधा’रणमा रहेको छ ।
तीमध्ये मर्मत गरेर ३७ वटा सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । अन्य १२६ वटा नयाँ थप गर्नुपर्ने हुन्छ । थप गर्नुपर्नेमध्ये १०८ वटा सामान्य र १५ वटा अत्या’धुनिक प्रविधिका रहेका छन् । सिसीटिभी जडानले महानगर क्षेत्रभित्र हुने अप’रा’ध निय’न्त्रणसँगै अनुसन्धा’नमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यससँगै शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रयोजनका लागि जडान गरेका सिसी क्यामेरामा एउटा क्यामेरा सडकतर्फ फर्काएर राख्न अनुरो’ध गर्ने योजना रहेको छ । यसबाट पुलचोकबाट गोन्द्राङसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र बाइ’पास सडकमा ३०० भन्दा बढी क्यामेरा सडक’तर्फ फर्काउन सकिने छ ।
यसबाट अप’रा’ध निय’न्त्रणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अधिकारी बताउनुहुन्छ प्रहरीको कन्ट्रोल कक्षबाट सञ्चालनमा आउने गरी महानगरका नौ स्थानमा सिआरभी टोली परिचालन गरिने छ । टोलीलाई २४सै घण्टा परिचालन गर्न सकिने छ । यसका लागि आवश्यकतानुसार जनशक्ति र स्थान परिवर्तन गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसले उच्छृ’ङ्खल तथा कानूनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण र विपद् उ’द्धार कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास कार्यालयले लिएको छ । महानगरभित्रका साँघुरा सडकमा हुने भीडभाड नियन्त्रण र छिटो प्रहरी पहुँच तथा गोप्य सूचना प्राप्तिका लागि महानगर क्षेत्रभित्र रहेका १२ वटा प्रहरी चौकी तथा पोष्टमा क्यूआरटी टोली परिचालन गर्ने योजनामा कार्यालय रहेको छ ।
सो कार्यका लागि १४ वटा मोटरसाइकल आवश्यक रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग अनुरोध गर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
कार्यालयले तयार गरेको अवधारणापत्रमा सि’सीटिभी जडानका लागि रु ५२ लाख ४० हजार, सिआरभी परिचालनका लागि नौवटा गाडी खरिद गर्न रु चार करोड पाँच लाख तथा क्यूआरटी परिचालनका लागि १४ वटा मोटरसाइकल खरिद
गर्न रु ३६ लाख ४० हजार बराबरको बजेट महानगरमा प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकारीले भन्नुभयो, “यी स्रोत’साधन प्राप्त हुनसकेमा विकसित मुलुकको झैँ सुरक्षा व्यवस्था गर्न हामी सक्छौँ ।” भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले महानगर
भित्रको सुरक्षा व्यवस्था राम्रो बनाउन महानगर प्रति’बद्ध रहेको बताउनुभयो । यस योजनामा प्रस्ता’व गरिएका अवधारणालाई क्रमशः पूर्णता दिँदै लगिने उहाँको भनाइ छ । सुरुमा बिग्रि’एका सिसी क्यामेरा मर्मत गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले नपुग भएका ठाउँमा थप गर्दै लगिने बताउनुभयो ।
२०७८ श्रावण २७, बुधबार १३:३१ गते 1 Minute 328 Views
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारको पहिलो गोप्य भेटर्वार्ता केपी ओलीसँग !
एमसीसीका विवादित बुँदा स्पष्ट पार्न सरकारले लेख्याे अमेरिकालाई पत्र !
चिन आत्तियो ! छानबिन सहिती गठन, नेपाली भूमि क’ब्जा गरेको पोल खुल्ने भएपछि चीनले माफी माग्ने !